Ukuhlolwa kwe-hypothesis kubandakanya ukwakhiwa ngokuqinileyo kweengxelo ezimbini: i- hypothesis engekho nenye i-hypothesis. Ezi ngcamango zinokubonakala zifana noko, kodwa zihluke ngokwenene.
Sazi njani ukuba yiyiphi i-hypothesis ayinanto kwaye yintoni enye enye? Siza kubona ukuba kukho iindlela ezimbalwa zokuxelela ukuhluka.
I-hypothesis engabonakali ibonisa ukuba ayiyi kuba nempembelelo ebonakalayo yokuzama kwethu.
Kwindlela yokwenza imathematika ye-hypothesis engekho kuyo kuya kubakho uphawu olulinganayo. Le ngcamango ichazwe ngu- H 0 .
I-hypothesis engekho yinto esizama ngayo ukufumana ubungqina ngokuchasene nokuhlola kwethu. Sithemba ukufumana ixabiso elincinci elincinane le- p-value elingaphantsi kwezinga lethu lokubaluleka kwe- alpha kwaye sinelungele ukugatya i-hypothesis engekho. Ukuba inani lethu le-p likhulu kune-alpha, ngoko siyahluleka ukukhanyela i-hypothesis engekho.
Ukuba i-hypothesis engazange ikhutshwe, kufuneka simele siqaphele ukuthetha oko kuthetha ukuthini. Ukucinga ngale nto kufana nesigwebo somthetho. Kungenxa yokuba umntu uvakaliswe "ongenetyala", akuthethi ukuba akamsulwa. Ngendlela efanayo, ngenxa yokuba siphumelelanga ukugatya i-hypothesis engenanto ayithethi ukuba le ntetho iyinyaniso.
Ngokomzekelo, sinokufuna ukuphanda ibango lokuba nangona iphi na idibano esitshele yona, ukufudumala komzimba omdala ongeyena mdala akuyinto eyamkelweyo ye-98.6 degrees Fahrenheit .
I-hypothesis engafanelekanga yokuzama ukuphanda oku: "Ukushisa komzimba omdala kumntu onempilo kuba ngama-98.6 degrees Fahrenheit." Ukuba sihluleka ukugatya i-hypothesis, akunjalo i-hypothesis yethu yokusebenza isala ukuba umntu omdala osempilweni onempilo unamaqondo angama-98.6 degrees. Asibonakali ukuba oku kuyiyo.
Ukuba sifunda unyango olutsha, i-hypothesis yile nhlobo kukuba unyango lwethu aluyi kutshintsha izifundo zethu nangayiphi na indlela enentsingiselo. Ngamanye amazwi, unyango aluyi kuvelisa umphumo kwizifundo zethu.
I-hypothesis ehlukile okanye yokulinga ibonisa ukuba kuya kuba nempembelelo ebonakalayo yokuzama kwethu. Kwindlela yokwenza imathematika yeengcamango ezingekhoyo kuya kubakho ukungalingani, okanye kungalingani nesimboli. Le ngcamango ibonakaliswe ngu- H okanye ngo- H 1 .
I-hypothesis enye yinto esilinga ngayo ukubonisa ngendlela engathanga ngqo ngokusetyenziswa kwe-test hypothesis. Ukuba i-hypothesis engekho yinqatshelwe, ngoko siyavuma enye i-hypothesis. Ukuba i-hypothesis engenziwanga iyanqatshwa, ngoko asiyi kwamkela i-hypothesis enye. Ukubuyela kumzekelo ongentla ngentlawulelo yomzimba wentsingiselo yomntu, enye i-hypothesis ithi "Umyinge omdala womzimba womntu awuyi-98.6 degrees Fahrenheit."
Ukuba sifunda unyango olutsha, enye i-hypothesis yinto yokuba unyango lwethu lushintsha izifundo zethu ngendlela enentsingiselo kwaye elinganiselwe.
Isiqendu esilandelayo sokunganaki sinokukunceda xa wenza i-null yakho kunye nezinye iingcinga.
Uninzi lwamaphepha obuchwephesha ancike ekuqulunqweni kokuqala, nangona ungabona abanye kwabanye kwincwadi yesibini .
I-hypothesis ye-Null: " x lilingana no- y ." Iingcamango ezingezinye " x alingani n ."
I-hypothesis ye-Null: " x ubuncinane y ." Ingcinga ehlukile " x ingaphantsi kwey ."
I-hypothesis ye-Null: " x ininzi y ." Ingcinga enye " x mkhulu kuney ."
Inkcazelo yeNkcubeko yabathengi
I-Piano Triad Chords engabonakaliyo
'Hayi, Wow!': Amanqaku malunga nokuPhambana
Izitishi: Iipropati zeQela leNkqubo yeZiseko zeMetals
Iintsingiselo Zamagama Emeyi ngesiLatini okanye kwisiGrike